Kusukile lokho kwaminyaka yonke kuMakhanda National Arts Festival – Bayede News
Imidlalo yeshashalazi ithe chithi saka
Posted on 2 July 2019 2 July 2019 by Bayede-News
Sekuphinde kwenzeka lokho. Iqalile ifestiveli yezobuciko yaminyaka yonke ebiyaziwa ngeleGrahamstown National Arts Festival esiyaziwa ngeleMakhanda National Arts Festival. Iqale ngoLwesine zingama-27 kuNhlangulana kanti iyoze igoqwe ziyisi-7 kuNtulikazi.
Phakathi kweminye imibukiso exube ishashalazi nomculo okuzojatshuliswa ngayo izinkumbi ezihambela leli dilikazi lezobuciko minyaka yonke kunalena elandelayo:
Umqondisi: J. Bobs Tshabalala
Lo mdlalo weshashalazi onomculo uqondiswe wuJefferson ‘Bobs’ Tshabalala kanti umculo uqondiswe nguBernett Mlungo. Ithimba labadlali lihlanganiswe uSimpho Mathenjwa, u-Andisiwe Mpinda, uKhutjo Green noLucky Ndlovu. Ekasi Lam-An Ode to Kwaito, Un-Owed to Kwaito ngumdlalo ogqamisa iqhaza lomculo weKwaito njengesithombe sangempela sempilo yasemalokishini aseSoweto nangaphandle kwemingcele yawo. Kulo mdlalo kusetshenziswa ulimi lwesicamtho okuchaza indlela yokukhuluma kwabantu baseSoweto ngendlela esabunkondlo.
Ababhali baqhakambisa ukuthi iKwaito, njengeHip Hop, iwuhlobo lwenkondlo edabuka ezindaweni ezingamadolobha esetshenziswa ngabasunguli bayo ukuchaza isimo sempilo emadolobheni ngokwenhlalo nangokwepolitiki.Lo mdlalo uzoboniswa eRhodes Box kusukela zi-5, ziyisi-6, nesi-7 kuNtulikazi.
Umqondisi: uJack Hofsiss
Umdlalo weshashalazi abahambele ifestiveli ungabaphuthi nakancane. Ungendaba eyiqiniso exoxwa ngomculo, amahlaya nangokubeka amaqiniso enjalo ngohambo lukaSteven Fales enkolweni yobuMormon ayezinikele kuyo kwaze kwaba uyanqunywa ebandleni ngenxa yobutabane.
Lena yindaba eguquguqukayo umlingiswa omqoka esuka esimweni sokuba wumfana oyisibonelo e-Utah lapho kuyikomkhulu labenkonzo yamaMormon azithole eseqashe indlu eManhattan khona e-United States of America.
Lo mdlalo weshashalazi iConfessions ukhombisa ukuvuthwa kombhali nomlingisi wawo uSteven Fales osezungeze umhlaba nawo cishe iminyaka eyishumi.
Useke waqokelwa i-Overall Excellence Award for Solo Show eNew York International Fringe Festival ne-Oscar Wilde Award for Outstanding New Writing for the Theatre eDublin Gay Theatre Festival.
Lo mdlalo useGraeme College kanti uboniswa ngezinsuku ezilandelayo: Zi-2 kuNtulikazi (19:00), zi- 3 kuNtulikazi (12:00) & (18:00), zizine kuNtulikazi (11:00)
Umqondisi: uNoluthando Lobese
Lomdlalo osanda kuzuza i-2019 Distell Playwrighting Award ubhalwe nguKoleka Putuma waqondiswa nguNoluthando Lobese wadidiyelwa yiThe Windybrow Theatre. Abadlali bawo ngoMomo Matsunyane Tshego noKhutsoane Lunga.
Umdlalo osuselwe enkonzweni yeSonto lePhasika ubonisa abathandi beshashalazi izigameko ezikhombisa inkolo nokukhuliswa ngevangeli kungaba yisisusa sobugebengu obesekelwe phezu kwenzondo.
Lo mdlalo obhalwe ngusonkondlo nombhali wemidlalo yeshashalazi onempumelelo uKoleka Putuma usixoxela indaba yabesifazane abathandayo nendlela umphakathi owamukela ngayo ubudlelwano babo bezothando.
UKoleka Putuma ungowokuqala ukuklonyeliswa ngeDistell National Playwright Award enhloso yayo ukuvundulula ikhono namazwi amasha kwezobuciko eNingizimu Afrika. Emveni kokuqokwa kukaPutuma umdlalo wabe usunikezwa indawo ekhethekile kuNational Arts Festival yanonyaka. Incwadi kaPutuma eyiqoqo lezinkondlo iCollective Amnesia yaqokwa njengeBook of the Year yiphephandaba iCity Press ngowezi-2017.
Lo mdlalo uboniswa e-45 THE HANGAR namuhla zingama-30 kuNhlangulana (14:30), lulunye kuNtulikazi ngelesi (19:00) namhla zi-2 kuNtulikazi (17:30).